myanmarphnews – Page3– Myanmar Photo News
Donation of Myanmar First Lady, Daw Cho Cho
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ကတော် ဒေါ်ချိုချို ရဲ့ “၂၀..၅..၁၈ “ရက်နေ့က ထမင်းဟင်း ​ခေါက်​ဆွဲ​ကြော်​ အလှူ
May 24, 2018 myanmarphnews Local, News, Religion
Heavy rain at Upper Myanmar
မနေ့ (၁၈.၅.၂၀၁၈)က မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း မိုးသည်းသွားသောအခါ ….. 18’5’2018′ မနေ့ညကရွာလိုက်တဲ့မိုး ”ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း”မြင်ကွင်း Source ; Facebook
May 21, 2018 myanmarphnews Local, News, Religion
Leeds United F.C Team visited Shwe Dagon Pagoda
Leeds United F.C. အသင်းမှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ခြင်း AYA Bank Tour 2018, Brought to you by AYA Bank အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ် (၆၀)အတွင်း ပထမဦးဆုံး ချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲ လာရောက်ကစားသည့် English League Championship အသင်း Leeds United F.C. […]
May 10, 2018 myanmarphnews Local, News, Sports
မိုးလည်းရွာ ပျော်လည်းပျော် နမ့်စန်မြို့နယ် ပန်လှိုင်းဆိုင် က ရှင်လောင်းပွဲ
May 1, 2018 myanmarphnews Life, Local, News
၁၀၄ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ ကံဘဲ့မီးနင်းပွဲ ပုံရိပ်များ
May 1, 2018 myanmarphnews Festival, Local, News
ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ကဆုန်လပြည့်နေ့၌ ဘုရားဖူးညောင်ရေသွန်းသူများဖြင့်စည်ကား
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်(ဗုဒ္ဓအခါတော်)နေ့၌ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ ဘုးရားဖူးညောင်ရေသွန်းသူများဖြင့် စည်ကားလျှက်ရှိသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈-ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားအား ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ခြင်း၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ အရုဏ်တက်ချိန်တွင် သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကိုရရှိကာ ဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့ခြင်း၊ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားထံမှ နိယတဗျာဒိတ်ကို ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ခံယူခဲ့ခြင်းနှင့် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် မလ္လာမင်းတို့၏ […]
April 30, 2018 myanmarphnews Festival, Local, News
ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံမီးလောင်ပြင်ကို BIO FOAM ဆေးရည်များအသုံးပြု၍ စတင်ငြိမ်းသတ် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံမီးလောင်ပြင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူသော BIO FOAM ဆေးရည်ဖြင့်ယနေ့ဧပြီလ၂၇ရက်နေ့မှစတင်ကာ ငြိမ်းသက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “မနက်ထဲကစပြီး BIO FOAM နဲ့ဖြန်းနေတာ။ မီးသတ်ကားပေါ်မှာရေနဲ့ရောစပ်တာ ။တစီးကို ဂါလံ၂၀၀ဆန့်တယ်လေ။မီးကတော့ထိန်းချုပ်နိုင်နေပါပြီး။အရှင်းငြိမ်းဖို့ကတော့ကြိုးစားရဦးမယ်”ဟု မီးလောင်ပြင်တွင် ကိုယ်တိုင်မီးငြိမ်းသတ်နေသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်။ ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံသည် ဧပြီလ၂၁ရက်နေ့မှစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ […]